hoco C1Travel charger whth3USB Home | 24 Naryee
1. Input: AC100--240V50/60HZ500mA;
2. Output: DC5V,3.1A MAX;
3. International foldable plug, European standard;
4. 3-port output 2.1A1A1A;
5. Flame retardant material, solid and durable;
6. National CCC Certification;
7. Multiple circuit protections;
Hoco E7 Wireless Earphone (Only One Piece)
အရည်အသွေးမြင့်ပြီး ၄.၁ bluetooth ဗားရှင်းရှိ Hoco E7 Wireless Earphone (Only One Piece) မြန်နှုန်းမြင့် ၁၀မီတာဧရိယာအတွင်း ၂.၄ကြိမ်နှုန်းဖြင့် ချိတ်ဆက်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ Apple ၏ iphone များနှင့် Android ဖုန်းအချို့အတွက် ၁ နာရီကျော် အားသွင်းပြီးလျှင် ၃ ...
ရိုးရှင်းသော၊ လှပသော၊ စွဲမက်ဖွယ်ကောင်းတဲ့ လက်တွေ့ကျသော၊ သယ်ဆောင်ရလွယ်ကူသော ခောတ်မှီစတိုင်ကျ ဒီဇိုင်းပုံစံလေးနဲ့ အားကိုအပြည့်အဝ ဖြည့်သွင်းပေးနိုင်သော Hoco B10 7000mAh 2.1A Wood Pattern Portable Power Bank လေးဖြစ်ပါတယ်။ Mobile Devices များ ဖုန်းအားကုန်...